प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली ब’पौती होइन – eSidhakura
मुख्य पृष्ठविचारप्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीको पुर्ख्यौली ब’पौती होइन
सं’विधानभन्दा आँखा र मन पढ्ने राष्ट्रपति भएकै कारण उनको ईगो सफल भएको हो । नत्र हिजोमात्रै संविधान लेख्दै गर्दा सजिलै पार्टी फु’टाउन नसकियोस् र ल’हड़मा संसद भ’ङ्ग गर्न नसकियोस् भनेर संविधानमा हामीले लेख्यौं भन्दै छाती फु’लाउने ओलीहरू नै हुन् । सोच्नुस् त, से’टिङ् अनुसार नै अदालतले यो फै’सला स’दर गर्ने हो भने संसदमा प्रधानमन्त्रीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिल्यै नआउने भयो । आए संसद भ’ङ्ग गरे भयो । किनकि जो आए पनि ओलीको भाषामा संसद-निर्वाचित नभएर जननिर्वाचित नै हुने भयो ।
भोलि ओलीको ठाउँमा देउबा या प्रचण्ड आउलान् । संसदभन्दा संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री ठूलो हुने भएपछि र संसदप्रति उ’त्तरदायी बन्न नपर्ने भएपछि तिनले म’नोमानी गरे पनि तिनलाई फे’र्न नसकिने भयो । संसद स्वतन्त्र समेत नहुने भयो । मेरो कुरा नमाने तेरो जागिर खाइदिन्छु भने भयो । उही व्यवस्थाबाट बनेको ओली सरकार ज’ननिर्वाचित हुने र अरू नहुने भन्ने पनि भएन । तिनले पनि जनताको ना’सो जनतालाई नै बुझाउँदै गए भने के होला ? अनि सुशील कोइरालाक़ो जननिर्वाचित सरकार ह’टाएर ओली प्रधानमन्त्री नबनेका पनि होइनन् ।
हिजो राजनैतिक स्था’यित्वका लागि सजिलै पार्टी फु’टाउन नपाइने बनायौं भन्ने र ताली खाने, अनि आफ्नो पालामा फु’टाउने अध्यादेश ल्याउने ! हिजो ल’हड़को भरमा संसद भङ्ग नहोस् भनेर व्यवस्था गऱ्यौं भन्ने र ताली खाने अनि आज संसद भ’ङ्ग गर्ने अधिकार मेरै हो भन्ने कुतर्क गरेर पनि हुन्छ र ?- नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट